Ufikelela njani kuphando | Isiseko soMvuzo
Ikhaya Ngathi Indlela Yokufikelela Uphando
KwiSiseko soMvuzo sinomdla wokubonelela ngokufikelela kubungqina bamva nje kunye nobona buchanekileyo bokuxhasa abafundi bethu ekuqondeni uthando, isini, iphonografi kunye nengqondo. Kumacandelo ethu oovimba sinika izifinyezo zezifundo zenzululwazi esizifundileyo.
Ndingawafunda njani amaphepha oqobo ophando?
Amanye amaphepha enzululwazi afumaneka ngokufikelela okuvulekileyo kwaye asimahla. Nangona kunjalo uninzi lubonakala kwiijenali ezipapashwe ziinkampani zorhwebo. Ukufikelela kunqunyelwe kwilungelo lokushicilela. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule ukuze ube nokufikelela kuzo. Bambalwa kakhulu abantu abanakho ukukwenza oku. Uninzi lwejenali ngoku lupapashwe ngombane kwaye ziyafumaneka njengeefayile zePDF zokukhuphela kunye neefayile ze-HTML zokufunda kwi-Intanethi. Uninzi lwezinto zifumaneka kumvuzo wokujonga ngokokubona.
Uninzi lwamathala eencwadi emfundo amakhulu abhalisela iijenali ezikwi-Intanethi, njengoko kunjalo ngamanye amalungu eNational Health Service. Izivumelwano zomthetho zithetha ukuba banokubonelela kuphela ngokufikelela kwabafundi ababhalisileyo kunye nabasebenzi. Amalungu oluntu ngokubanzi e-United Kingdom ngokuthe ngcembe afumana ukufikelela kwimathiriyeli epapashwe e-UK kwiThala leencwadi laseBritane, kwiLayibrari yeSizwe yaseScotland kunye neLayibrari yeSizwe yaseWales. Kula mathala eencwadi ukufikelela kufumaneka kuphela xa uhamba-ngaphakathi kwiindwendwe. Ngalo lonke ixesha jonga kwangaphambili ukubona ukuba uyakwazi ukufikelela ngaphambi kokuba uhambe.
Indawo elungileyo yokuqala ihlala ihleli Jonga iThala Leencwadi laseBritane.
Abantu baseScotland banokuzama ILayibrari yeSizwe yaseScotland. Ukuba uhlala eWales, i ILayibrari yeSizwe yaseWales kufuneka ube yindawo yakho yokuqala.
Indima yeSiseko soMvuzo
Kule webhusayithi siza kuzama ukubonelela ukufikelela ubuncinci kwisishwankathelo okanye isishwankathelo sephepha ngalinye esilikhankanyileyo. Siza kubonelela ngekhonkco kumshicileli okanye naziphi na iindlela zasimahla onokuzifunda. Isicwangciso kukukhupha ulwazi oluphambili kwaye ulunxibelelanise ngendlela efikeleleka kubantu abaninzi.